- नागरिक खोज
३ हप्ता अगाडि • २८३ पटक पढिएको
एजेन्सी-साबधान ! को-रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! को- रोना संक्रमण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जुन खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर हुनबाट बचाउँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । को- रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले निम्न खानेकुराहरुबाट टाढै बस्नु होला ।
यो पनि पढ्नुस: अक्सिजनको स्तर बढाउन र फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्न खानुहोस यी खानेकुरा: शरीर स्वस्थ रहन फोक्सोले राम्रोसँग कार्य गर्न आवश्यक छ। फोक्सोले फिल्टर गरेपछि मात्र अक्सिजन शरीरको प्रत्येक भागमा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा फोक्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि फोक्सोले राम्ररी काम कार्य गरेन भने दम, ब्रोन्काइटिस, निमोनिया, क्षयरोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
लसुन – लसुनमा एन्टिबायोटिक, एन्टिफङ्गल, एन्टिवाइरल गुणहरूको साथसाथ क्याल्सियम, फास्फोरस, आइरन, भिटामिन जस्ता गुणकारी तत्वहरूले समृद्ध हुन्छ। जसले फोक्सोलाई बलियो राख्न मद्दत गर्दछ। प्रत्येक बिहान खाली पेटमा २ देखि ३ वटा पोटी खाएमा ग्यास्ट्रिकलाई पनि ठिक गर्दछ। यदि लसुन त्यतिकै खाँदा पिरो हुन्छ भने यसलाई राति पानिमा भिजाएर र बिहान सेवन गर्न सकिन्छ